MoeMaKa Radio & Multimedia - ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အာရ်အက်ဖ်အေ အင်တာဗျူးမှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြချက်
ဇူလိုင် ၁၉၊ ၂၀၁၁
Tin Moe - The Bronze Statue Hidden under the wild grass
64th Anniversary of Burma's Martyrs' Day - Special Book comes out
Maung Yit - The Disobedience War Against The Regime, 19th July
၆၄ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ်
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ကျဆုံးတဲ့ နံနက် (၁၀) နာရီ (၃၇) မိနစ် အချိန်ကိုရောက်ရင် ရန်ကုန်တမြို့လုံး ဥသြဆွဲတဲ့အသံတွေ ဖုံးလွှမ်းနေ တတ်ပြီး၊ ရေဒီယိုကပါ ဥသြဆွဲတဲ့အသံတွေ အသံလွှင့်ပေးပါတယ်။ အဲဒီ ဥသြဆွဲတဲ့အသံ ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ထဲ လမ်းပေါ်မှာ မောင်းနှင်နေ တဲ့ မော်တာ် ကားတွေ ရောက်ရာနေရာမှာ အရိုအသေပေးတဲ့အနေနဲ့ ရပ်တန့်ပြီး ဂါရ၀ပြုကြပါတယ်။
Speeches by Bogyoke Aung San
ဇူလိုင် ၁၉ အာဇာနည်နေ့ အမှတ်တရ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မိန့်ခွန်းများ စုစည်းချက်
- နားဆင်ရန် ပုံကို နှိပ်လိုက်ပါ -
Aung San Poem - Burmese Text Book
Aung San's Speech - 13th July 1947
Min Kyaw Khine - Leader like aung san ...where?
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို လူထုက ဘာကြောင့်တမ်းတနေကြသလဲ!
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို လူထုက ဘာကြောင့်တမ်းတနေကြသလဲဆိုတော့ သူ့လို ကိုယ်ကျိုးမငဲ့ဘဲ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် တကယ့် ခေါင်းဆောင်အရည်အချင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ သူလိုခေါင်းဆောင်မျိုး အလိုရှိနေလို့ပဲ။
ကျဆုံးသွားတဲ့ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေး အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ
ကျဆုံးသွားတဲ့ မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေး အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို လေးစား ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် မှတ်တမ်းတင် ကြိုးစားရေးဆွဲထားတာပါ။
ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ချွတ်ယွင်းမှု တစုံတရာရှိခဲ့ရင် ရေးဆွဲတဲ့ ကျနော် မင်းကျော်ခိုင်ရဲ့တာဝန်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ပုံများကို ဖြတ်တောက် ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုဘဲ မူရင်းအတိုင်း လွတ်လပ်စွာ မည်သူမဆို ကူးယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။